UHunt nobunzima kwiChiefs - Ilanga News
Home Ezemidlalo UHunt nobunzima kwiChiefs
Ngaphandle kwecala leFifa, seyiqale nesifo sokuvuza
U-ITUMELENG Khune ube yikhongco elibuthaka iKaizer Chiefs ibhabhadiswa yiSundowns ngo-3-0 ngoMgqibelo koweDStv Premiership eFNB Stadium.
UVEZE ubunzima abhekene nabo uGavin Hunt ongumqeqeshi weKaizer Chiefs enenebulwa yiMamelodi Sundowns ngo-3-0 kowe-DStv Premiership ngoMgqibelo ntambama eFNB Stadium, eSoweto.
Amagoli okunqobe ngawo iDowns avalelwe enethini nguPeter Shalulile, uKermit Erasmus nephenathi kaThemba Zwane. Lo mdlalo ububhekwe ngabomvu kwazise iChiefs iye kuwona isenegqubu njengoba iDowns iyiphuce iqatha emlonyeni idla isicoco seligi ngosuku lokugcina lwesizini edlule.
Bekubhekwe ukuthi iChiefs iwunqobe lo mdlalo kwazise ibisekhaya kodwa kwagcina kutitinywe yona ngesibhaxu. Nokho u-Itumeleg Khune ube yikhongco elibuthaka kwiChiefs njengoba cishe wonke amagoli kube ngamaphutha akhe.
UHunt ebuzwa ukuthi ngabe uzizwa kanjani njengoba ubebhekene nekilabhu ebigabe ngabadlali abasha ekubeni yena engakwazi ukusayinisa ngenxa yokuthi basalinde isinqumo seCourt of Arbitration for Sport (Cas) ngecala abalidlulisile emuva kokuba iFifa ibagwebe amawindi amabili ingabasayinisi abadlali, uthe:
“Kangifuni ukungena kakhulu kuleyo kodwa ngeke ngikhulume amanga, kunzima.
“Banalo lonke uhlobo lwabadlali thina kasikwazi kwenza lutho. Kodwa-ke yisimo esibhekene naso kufanele sibe nesibindi yize kunzima kunjalo.”
Ube eseyivuma njengendoda induku.
“Kakukho okungako engingakhala ngakho, sihlulwe yikilabhu enhle futhi ebeyingcono kunathi osukwini. Kodwa-ke wonke amagoli abawashayile kube ngamaphutha ethu, empeleni bawanikwe yithina. Ukushaywa ngamagoli angaka kakumnandi kodwa-ke nathi siwatholile amathuba sangawasebenzisa.
“Noma kunjalo kakufanele sivuzise amagoli ngalolu hlobo, yinto okumele ngiyilungise ngabo laba badlali esinabo. Izinto kazisihambelanga kahle kulo mdlalo, umuntu kufanele avume,” kusho uHunt.
UManqoba “TV” Mngqithi ololonga iSundowns, uthi konke kuhambe ngokohlelo.
“Umdlalo uhambe ngendlela ebesiwuhlelele ngayo, konke kusivumile. Ingijabulisile indlela esiqale ngayo, ngethemba ukuthi sizoqhubeka ngawo lo mgqigqo.
“Kasibahlulanga ngoba bebheda yikhona nje ukuthi sisebenze emaphutheni abawenzile. Kodwa-ke sijabule ngalo mphumela,” kusho uMngqithi.
Previous articleUsule isidumo uthisha ‘odlwengule’ umfundi
Next articleAbalandeli nomkhankaso wokweseka uKatlego